‘सुकीधुपी‘ मा प्रकट नक्कली स्वतन्त्रताको नियति,(गुणराज लुइटेल)
विश्वास गरिन्छ कि अमेरिकाको रमझममा त सधैं खुशी मात्रै हुन्छ । संधैं रमाइलो हुन्छ । यहांको जीवनमा अंध्याराका बादलहरु कहिलै पनि मंडारिंदैनन् बरु यहां त सधैं सप्तरंगी इन्द्रेणीहरु उदाइरहन्छन् । धेरैलाई लाग्छ यहां जीवनले खुशीका हर सम्भावनाहरुलाई चुम्न सफल भएको हुन्छ, बांकी केही पनि रहेको हुंदैन । दुःख र दर्द भन्ने कुरा त अमेरिकी जीवनमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । यहां सधै शुभ प्रभातले स्वागत गरिरहेको हुन्छ । यहां त रातलाई संधैं पूर्णिमाले सजाइरहन्छ र सुर्योदयसंगै दिन चङ्गा अनि छ्याङ्ग हुन्छ । मान्छेहरुका वीचमा आत्मीयता र मिलनको प्रतिछायां हेर्न अन्त जानु पर्दैन । यही भूमिमा सवैका ठूलाठूला मनोकांक्षाहरु साकार हुन्छन्, उनीहरुलाई लक्ष्य प्राप्ति गर्न यो ठाउंमा कुनै अवरोध छैन त्यसैले यहां कोही पनि रुंदैन बरु हांसो र खुशी बांड्न पनि उनीहरु भ्याइरहेका हुंदैनन् । रङ्गीन पेय र चौरासी व्यञ्जनको उपलव्धताले उन्माद जीवनहरु मात्रै यहां हुन्छन्, विछोड र वेदनाहरु यहां कमै छन् जति यन्यत्र हुन्छन् ।
यस्ता र यस्तै धेरै विश्वास र अनुभूतिहरुलाई कडा चुनौति दिंदै सुकीधुपी खण्डकाब्यले मानव जीवन आखिर जहां भए पनि त्यहां अनेक थरीका वेदना, बन्धन, शोक, प्रताडना, क्रन्दन र मनोदशाहरु व्याप्त हुन्छन् र यिनीहरुको प्रतिकारमा रुमल्लिदा उत्पन्न जटीलताले जीवनका रङ्गहरुलाई कसरी बेरङ्गी बनाइदिन्छ भन्ने सजीव चित्रण गरेको छ । लेखकको जागीर संसारकै उच्च वित्तीय संस्था विश्व बैकमा हुनुले झट्ट हेर्दा उनी अमेरिकी शानमा चुर्लुम्म डुबेका होलान् भनेर स्वभाविक अन्दाज गर्न सकिन्छ । तर उनले नेपालको दुर्गम जिल्ला तेह्रथुममा जन्मेर त्यहांका भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगति र सांगुरीहरुलाई राम्ररी अनुभूत गरेका हुंदा उनमा मानवीय पीडाहरुलाई बुझ्न सक्ने प्रशस्त चेतना रहेको हेक्का सुकीधुपीमा राम्ररी दिएका छन् । त्यसैले त उनी यस काव्यको माध्यमबाट चराहरुको कथा भन्दै सारा मानव जातिकै नियतिलाई आंशुबाटै बगाउन चाहन्छन् । मानिसले कतिपय प्रताडनाहरु उसको विसंगतिपूर्ण बर्तमानमा स्वभाविक तथ्यका रुपमा भोगिरहेको हुन्छ भने कतिपय नव समस्याहरु आफ्नै कारणले जन्माउछ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा आफै शिकार बन्न जान्छ भन्ने तीतो वास्तविकतालाई सर्जक नहिच्किचाइकन वर्णन गर्छन ।
यो कृति अमेरिकी प्रवासमा लेखिएको हुंदा यसलाई यसैको सेरोफेरोमा हेरिनु बढी सान्दर्भिक होला भन्ने ठान्दछु । सर्जक संग्रौलाले यस खण्ड काब्यमा समाजमा रहेका दुई चरित्रलाई सुकी र धुपीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको मेरो बुझाइ हो । समाजमा एकथरी यथास्थितिलाई स्वीकार गरेर बस्न रुचाउंछन् । उनीहरु ठान्दछन् जे भयो त्यो हुनु नै थियो । भगवान जे गर्छन् असलकै लागि गर्छन् । मानवीय प्रताडनाले उनीहरु जकडिएका हुन्छन् तर पनि त्यसलाई आफ्नो हुनै पर्ने नियति भन्दै चुपचाप सहेर बस्छन् । समाजमा परिवर्तन नचाहनेहरु राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय असमानताहरुलाई ठीकै त छ, भै गो नि भनेर चुप लाग्छन् । कि त यस्तो असमानतालाई तोड्ने उनीहरुसंग आंट बल हुंदैन, कि त उनीहरु कांतर हुन्छन्, कि त उनीहरु भलाद्भी बन्न चाहन्छन्, कि त यो उनीहरुको सोचाई र रोजाई बाहिरको कुरा हो । या त उनीहरु कसैसंग डराइरहेका हुन्छन् । यस खण्ड काब्यमा यस्ताहरुको प्रतिनिधित्व सहज रुपमा धुपीले गरेको छ । धुपी पिजडामा छोडिएको र थुनिएको एक चरा हो । उसको सवैभन्दा ठूलो पीडा त बन्धक हुनु नै हो तर पनि उ त्यो बन्धनलाई तोडेर भाग्ने कोशिर गर्दैन । कहिले ढोका खुल्ला हुन्छ भनेर उ चियो गर्दैन । उ मुमासंग डराउंछ । पक्राउ परिने, कारवाही हुने जस्ता कुराबाट उ निकै डराएको हुन सक्छ । उसको डर नै उसको स्वतन्त्रताको जड हो भन्ने ज्ञान उसलाई हुंदैन । सुकी उडेर गएको देख्दा पनि त्यसबाट उसले चेतना लिन सकेको छैन । कहिले कहीं पिंजडाको ढोका खुल्न सक्थ्यो तर पनि उसले त्यतातिर ध्यान दिएन । भन्छ— ‘चलेकै छ जिन्दगानी सानो ठाउंले के भो?, खुसी सुखी बांचे पछि पिंजडाले के भो?‘
उसले एक किसिमको जीवन गुजारी रहेको छ जो अरुको भरमा अडिएको छ । पृथ्वीको भारी भने झै उ सांच्चिकै भारी बनेको छ । कसैले चारो दियो भने पेट भरियो, दिएन भने भोकै बस्नु प¥यो । जति कराए पनि आफ्नो आवाज आफैसंग हुन्छ, त्यसले आफैलाई झर्को गर्दछ । उसको जीवन फगत एक भारी हो अरुको लागि । अरु कसैले धुपीको लागि भनेर समय निकालिदिनु पर्यो, समय समयमा सेवा गरिदिनु पर्यो । स्वदेश मै रहेका या विदेशमा रहेका धेरै मानिसहरु जे छ ठीक छ भन्ने मानसिकताले आज आफू जो हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले यथास्थितिले खडा गरेको बन्धनलाई तोड्न सकिरहेका छैनन् । प्रवासको जीवनलाई उनीहरु उन्मुत्तिकै रुपमा लिईरहेका हुन्छन् । तर घण्टौंसम्मको शारीरिक परिश्रम, थकान अनि कडा आर्थिक नियमकानून र विल भुक्तानीका झण्झटहरुको अगाडि एक किसिमको अघोषित बन्धककै जीवन त बांचिरहेका छैनन्? सर्जक कताकता यतातिर पनि ब्यङ्ग्य गर्छन धुपीलाई अगाडि सारेर ।
सुकी धुपी खण्डकाब्यमा मात्रै तीन पात्रहरु छन्—सुकी, धुपी र मुमा । धुपी एकातिर सुकीको विछोडको पीडाले पिजडाभित्र रोइरहेको हुन्छ भने सुकी मुमालाई झुक्याएर भाग्न सफल भई स्वतन्त्र भएर जंगलतिर पलायन हुन्छे । सुकीले पनि लामो समय पिंजडाको जीवन भोगिसकेकी छे । त्यहां उनीहरु जोडी नै बस्न पाएका भए पनि त्यो खुशी जीवन नरकतुल्य थियो । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कुरीतिहरुका वीच विपन्नताको जीवन बाच्न बाध्य मानिसहरु र्झै सुकी पनि त्यसरी नै बांचेकी हुन्थी पिंजडामा । तर आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्दै स्वतन्त्रताको बाटोमा फड्को मार्ने मानिसहरु जस्तै उसले पनि पिंजडा तोड्ने साहस गरी । उ स्वतन्त्र भई र खुल्ला आकाशमा कावा खान थाली । त्यो घरको तानाशाह भनेको मुमा थिइन । तर सुकीको स्वतन्त्रतामुखी चाहको अगाडि उनको केही पनि लागेन । जव मानिसले कुनै परिवर्तनको चाहना गर्दछ भने त्यो सजिलै प्राप्त हुन सक्दैन । जमीनमा लिप्त भएर बसेको ढुङ्गालाई उप्काएर अर्कोतिर पल्टाइन्छ भने त्यो ढुङ्गाको परिवेशमा आउने नयां रुप एक परिवर्तन नै हो । भीरबाट त्यो ढुङ्गा लड्यो भने त्यसले धेरै क्षति पु¥याउन सक्छ, जन धनको क्षति पनि हुन सक्छ । त्यसैले ढुङ्गा पल्टाएर केही गर्नु छ भने सुरक्षाको प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
सर्जकको स्वीकारोक्ति के हुन सक्छ भने परिवर्तन आफैंमा सफलता हैन, यो नै आफैंमा पूर्ण स्वतन्त्रता होइन । मुख्य कुरा त आफूले निम्त्याएको परिवर्तन र हासिल गरेको स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न सक्नु हो । यदि स्वतन्त्रतालाई सही व्याख्या गर्न सकिएन भने, सही रुपमा ब्यवस्थित गर्न सकिएन भने यो स्वच्छन्दतामा परिणत हुन जान्छ । यो आफैंमा जटील बन्न जान्छ । यसले जीवनलाई अग्रगामी सुख सुविधा दिनुको सट्टा थप कष्ट थपिदिन्छ । धेरै मानिसहरु परिवर्तन र क्रान्तिबाट आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान हुने विश्वासले पुलकित हुन्छन् । आफ्ना नव आकांक्षाहरुलाई शिखरमा पुर्याउँछन् । तर परिवर्तनको स्वभाविक नियति भनेको त्यसको सही व्यवस्थापन हो भन्ने बुझ्न सक्दैनन् । आखिर अन्त्यमा सवै कुरा भद्रगोल भएपछि दुःख मनाउ गर्न थाल्दछन् । त्यसरी नै आफैंलाई धिक्कार्न थाल्दछन् जसरी सुकी पिंजडाबाट स्वतन्त्र भएर पनि थुनिएकै महसूस गर्दछे । उसका अगाडि पहाड, पर्वत, आकाश, बादल, जंगल, शमुद्र सवै भएर पनि, बथानका बथान साथीहरु भएर पनि ऊ आफ्नो मान्छेको लागि तड्पिरहेकी हुन्छे । धुपीसंगको मिनलको लागि छट्पटाइरहेकी हुन्छे । कताकता एक्लै महसूस गर्छे । भन्छे— ‘एउटा साथी काफी थियो पिंजडामा छंदा, एक्लोपनको याद थिएन धुपीसंग हुंदा‘ ।
उसलाई स्वतन्त्र ठाउंमा बथानहरुका वीचमा पनि एकादुई साथी बनाउन धेरै गाह्रो भएथ्यो । एक्कासी प्राप्त स्वतन्त्रताको परिणाम स्वरुप उ धेरै बथानमा पुगेकी थिइ । तर समूह समूहमा थुप्रिएका ती बथानहरुले उसलाई गरेको घृणा, तिरस्कार र अपहेलनाले गर्दा उसलाई समूहप्रति पनि विश्वास हुन छोड्यो र पिंजडाको एउटा साथी नै संसारमा पर्याप्त भएको महसूस हुन थाल्यो । त्यसैले साथी खोज्ने क्रममा दिक्क भएपछि उसले ठूला चरा र ठूला झुण्डहरुलाई छोडेर स–सानाहरुसंग संगत बढाउन थाल्दछे । ऊ गुनगुनाउ“छे– ‘मनबाट सोचें मैले थाल्छु सानोबाट, हौसला त्यो मनमा आयो झरें हांगाबाट । मनभित्र गुह्य कुरा सुझेजस्तो लाग्यो, दुःख कष्ट हण्डरबाट बुझें जस्तो लाग्यो ।‘
सुकीले पिंजडाबाट भागेपछि आफ्नो स्वतन्त्र जीवनमा भोगेका थरीथरीका दुःख कष्टहरुको दर्दनाक व्याख्या गर्दै सर्जकले वास्तविक खुशी त घरबाटै शुरु हुनु पर्छ, विछोडको पीडासंगै प्रवासमा पाएको देखावटी स्वतन्त्रताले कसैलाई पनि खुशी तुल्याउन नसक्ने सन्देश दिएका छन् । कतिपयले प्रवासको स्वतन्त्रतालाई विछृङखलपूर्ण स्वेच्छाचारिताको रुपमा बुझेको र आफ्नो नैतिक धरातलबाट तल गिरेर रीत फेर्ने कोशिस गरेको आरोप पनि सर्जकले सुकीको अनुभूति मार्फत लगाएका छन् ।
झ्याउरे शैलीमा लेखिएको यो खण्डकाब्यमा सुकीको विछोडपछि चिन्तामा डुवेको धुपीको पिंजडामै देहवसान हुनु र सुकीले आफ्नो चेत खुलेपछि स्वतन्त्रताको वैभवबाट धुपीलाई भेट्न आउंदा उसको अवसान भैसकेको हुनुले काब्य शोकमय छ । धुपीले पिंजडामा स्वभाविक जीवन गुजार्न नसक्नु र सुकीले अथाह स्वतन्त्रतालाई पनि त्यागेर धुपीलाई भेट्न आउनुले यी दुवैले आफ्नो आकांक्षा अनुसारको जीवन विताउन नपाएको प्रष्ट हुन्छ । कतिपयले गाउँ देखि प्रवाससम्म आफ्ना असंख्य मानव वेदनाहरुलाई छायाँ पार्दै नक्कली स्वतन्त्रतालाई सक्कली झैं गर्नु एउटा खोष्टो आडम्बर बाहेक केही पनि होइन । वास्तवमा परिवारसंगको विछोड, आफन्तको अभाव, असल साथी भाइहरुको कमीले गर्दा तड्पिएका डायस्पोराका कैयौ जीवन कथाहरु सुकी र धुपीकै जस्ता हुनसक्छन् । वास्तवमा सर्जक कवि वाशिङ्गटन डि.सी. क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका पुराना वासिन्दा हुन र उनले यहांका आप्रवासी समाजहरुमा देखिने विसंगतिहरुलाई पनि सुकीको माध्यमबाट औल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
असी पृष्ठमा फैलिएको यो शोक खण्डकाब्य कवि प्रेम संग्रौलाको पहिलो कृति हो । त्यसो त वाशिङ्गटन डि.सी. क्षेत्रमा आयोजित विभिन्न साहित्यिक सम्मेलनदेखि लिएर कोठे कवि गोष्ठी सम्ममा आफ्ना विशिष्ठ रचनाहरु वाचन गरिरहनु हुने संगौला अप्रकाशित रुपमा रहेका धेरै रचनाहरुका धनी पनि हुनुहुन्छ । शिल्प र सरका हिसावले सर्जक निकै अव्बल देखिन्छन् । लयबद्ध गर्दा कतैकतै सानातिना रड्काइ नभएका भए धेरै राम्रो हुने थियो । काब्यमा संस्कृतका क्लिष्ट शव्दहरुको खासै प्रयोग गरिएको छैन । गग्रेटो, डम्फू, चोचोमोचो, पटुका, दङ्ग, भङ्ग, बटुका, लगनगांठो, भरभराउंदो, मुस्लो, घरबेटी, हुल, कठ्याङ्ग्रिएको, फिट्टो, कालकोठरी, चोक्टा, झल्यास्स जस्ता झर्रा नेपाली शब्दहरु यत्रतत्र प्रयोग भएको पाइन्छ । खण्ड विभाजन गर्दा धुपीको अन्त्यलाई तेस्रोमा राखिएको छ तर यो दोस्रोमा हुंदा पनि हुन्थ्यो र सुकीको आत्मानूभूति चाहि अन्तिममा हुदा पनि हुन्थ्यो होला । यस अण्डकाब्यकी प्रकाशिका मञ्जु संग्रौला हुनुहुन्छ भने पुस्तकलाई लेखकले पिता स्व. गोपीचन्द्र संग्रौला र माता स्व. लक्ष्मीदेवी संग्रौलामा समर्पित गरेका छन् । पुस्तकमा समीक्षा मन्तव्य नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकूलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती र भाषाविद् कृष्णप्रसाद पराजुलीले दिनु भएको छ भने डा. ऋषिराज बराल र डा. ताराकान्त पाण्डेयले छोटो टिप्पणी गर्नु भएको छ ।